zucchini နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူလျင်မြန်စွာ spaghetti | Bezzia
zucchini နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူလျင်မြန်စွာ spaghetti
မကြာသေးမီက zucchini ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများစွာတွင်အသုံးပြုနေသည်။ ကျနော်တို့သိတယ် ထို့အပြင်ယခုရာသီရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သင့်စားပွဲပေါ်၌ထည့်သွင်းရန်သင့်အားမတူညီသောအဆိုပြုချက်များကိုမကမ်းလှမ်းခြင်းသည်မှားသွားပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထူးခြားသောစာရွက်စာတမ်းတွင်နောက်ထပ်စာရွက်တစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ zucchini နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူလျင်မြန်စွာ spaghetti ။
အသုံး ပြည်တွင်းနှင့်ရာသီအလိုက်ထုတ်ကုန် ကအမြဲတမ်းစားပွဲ၌ကောင်းတစ် ဦး မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်စားပွဲကိုပျင်းစရာကောင်းအောင်၊ စိတ်ဝင်စားစရာနည်းအောင်မလုပ်နိုင်သည့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောကျန်းမာသည့်အလေ့အထ။ ဤရွေ့ကား spaghetti တို့သည်ကြီးစွာသောဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းရလဒ်မှာအလှည့်ကျဖြစ်သည်။
အနည်းငယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် casseroleဤမြန်ဆန်သော spaghetti ကိုပြင်ဆင်ရန်သင်မလိုအပ်ပါ။ ဒီစာရွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘာကိုအထင်ရှားဆုံးဖြစ်မလဲသူကအရှိန်မြန်မှာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာပဲအရာအားလုံးပြီးသွားပြီ။ သူတို့ကိုသင်ကြိုးစားဝံ့သလား။ သင် spaghetti ကိုနှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်ကိုစမ်းရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ပုစွန်နှင့်ဟင်းငံပြာရည်.
12အဘို့အပါဝင်ပစ္စည်းများ
၁၅၀ ဂရမ်။ spaghetti ⠀
ခြောက်သွေ့သော oregano တစ် ဦး ဖြစ်တော့
paprika ၏ pinch
400 ml ။ ရေ
ကြက်သွန်နီကိုခုတ်ပါ zucchini, မုန်လာဥနီနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးများကို casserole ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။
ထို့နောက် အချပ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါ, နံ့သာမျိုးနှင့် spaghetti ။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုဆူပွက်လာသည်အထိမြင့်မားသောအပူရှိန်အပေါ်တွင်ရေနှင့်အပူကိုသွန်းလောင်းပါ။ ဒီတော့အပူကိုဖြုတ်ချပါ ၁၀ မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ ရံဖန်ရံခါနှိုးဆော်။
အချိန်ပြီးနောက်, မီးထဲကဖယ်ရှားပါ, ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲကိုထည့်ပါ နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ရောမွှေပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ၊ သို့သော်မလွန်ပါနှင့်! ဒါမှမဟုတ်ဒိန်ခဲလိုအရသာရှိမယ်။
အမြန် spaghetti များကို zucchini နှင့်ဒိန်ခဲပူပြင်းစွာစားသုံးပါ။ အေးခဲနေသောရေခဲသေတ္တာထဲရှိကျန်ရှိသောကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကျန်ရှိနေပါကကြိုတင်ထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » အချိုအချဉ်များ » zucchini နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူလျင်မြန်စွာ spaghetti